Wararka - Biyo-abuurka - dalab kordhinta ayaa keeneysa fursado aad u ballaaran
Warshadaha khudaarta bey’ada ayaa si xawli ah u sii fidayay isla markaana ay u soo baxayeen Maanta, beero-dhaqashada waxay u dhigantaa boqolkiiba 50 kalluunka adduunka laga cuno. Ku tiirsanaanta beero-dhaqashada ayaa la filayaa inay sii socoto inay kororto, dhowr jeerna heerka koritaanka wax soo saarka kale ee hilibka. Ku tiirsanaantan sii kordheysa ee ku saabsan biyo-dhaqashada waxay soo bandhigeysaa fursado aad u ballaaran, laakiin sidoo kale waxay kordhineysaa halista soo-saareyaasha.
Maaddaama cadaadiska lagu kordhinayo wax-soo-saarka dalagga uu sii xoogeysanayo, waxaa sii kordhaya walaaca ay ku leedahay saameynta nidaamyada biyo-dhaqashada furan ee deegaanka iyo noocyada duurjoogta ay ugu wacan tahay cudurrada iyo wax soo saarka qashinka oo kordhay. Isla mar ahaantaana, kalluunka iyo kalluunka qolofta leh ee lagu kiciyey nidaamyada furan waxay u nugul yihiin qaadista cudurrada ka jira deegaanka dabiiciga ah, waana inay ku tiirsanaadaan wabiga ama durdurrada badda si ay u qaadaan alaabada qashinka una ilaaliyaan xaaladaha ku habboon. Hirgelinta tallaabooyin wax ku ool ah oo ku saabsan badbaadinta noolaha oo lagama maarmaan u ah ilaalinta noocyada asalka ah iyo sugidda jawi cudur la'aan ah oo dalag caafimaad qaba way ku adag tahay nidaamyada furan. Arimahan ayaa kordhiyay baahida loo qabo nidaamyada salka ku haya dhulka ee ka soocaya kalluunka beeraha iyo kalluunka qolofta leh ee dhiggooda duurjoogta ah.
Nidaamyada xiran, nidaamyada taangiyada ku saleysan sida Nidaamyada Dib-u-wareejinta (RAS) ama nidaamyada qulqulaya, waxay bixiyaan kala-soocida noocyada hooyo waxayna u oggolaaneysaa wax soo saar kordhaya xarumaha aquaculture. Nidaamyadan ku jira ayaa suurtogal ka dhigaya in la abuuro xaaladaha ugu habboon ee caafimaadka dalagga, hagaajinta wax-soo-saarka iyo tayada. RAS xitaa waxay isticmaashaa biyo yar.
Nidaam badbaado leh, waara, kharash-ku-ool ah oo leh xakameyn buuxda - fududeeyay.
Waqtiga dhejinta: Jul-21-2020